Village Nubian 5 * (Egypt / Sharm El Sheikh) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Sharm El-Sheikh - omunye ethandwa kakhulu izivakashi izindawo eGibhithe. Futhi baningi ehhotela eziyinkimbinkimbi ngokuthi i-Nubian Village 5. Ngakho-ke, namuhla izivakashi Russian kuba nesithakazelo ilwazi mayelana nale ndawo. is ehhotela elise kuphi? Ukuze ivumelane ukuphumula ku insimu yalo? Yini zinsiza zinikelwe ukuba izivakashi zakwamanye amazwe?
Ihhotela iseningizimu olunothile Bay ngokuthi Nabq Bay, sizungezwe wamasundu izitshalo ezingavamile, esondelene kakhulu emabhishi segolide. Eliseduze sezindiza kuyinto amakhilomitha amahlanu nje kusukela eziyinkimbinkimbi ehhotela, encwadini edumile resort edolobheni Sharm el-Sheikh. Ibanga kuya esingaphansi ethandwa izivakashi indawo, Naama Bay Bay, ingamakhilomitha angu-20 kuphela ukusuka - uma ufuna lapha ungakwazi kalula ukufinyelela ngezinto zomphakathi noma imoto eziqashisayo.
Empeleni, indawo ubhekwa izinzuzo Ihhotela Nubian Village 5. Sharm el-Sheikh - nendawo enkulu yezinhlobo ezahlukene ukuzilibazisa, ngoba kungaba ukunikela abahambi hhayi amabhishi kuphela omangalisayo, kodwa futhi ukuzijabulisa, inkonzo izinga kanye Yiqiniso, ezithakazelisayo zokungcebeleka zomlando ukuthi bayakufanelekela ukubona.
incazelo emfushane eziyinkimbinkimbi ihhotela
Elikhulu endaweni kahle igcinwe kunothile zasemazweni - lokhu ingenye izici eziningi ukuthi ihhotela idume Nubian Village 5. Izibuyekezo ukuqinisekisa ukuthi izingqalasizinda eyinkimbinkimbi kuyinto elula ngempela. Ophakathi nendawo isakhiwo esikhulu esiyinhloko nasemaceleni ke - ezintathu storey izakhiwo zokuhlala kanye ezincane Bungalow esekusithekeni. Bonke zakhelwe yendabuko isitayela Nubian, enikeza ehhotela flavour esiyingqayizivele. Futhi phakathi kwamabhilidi kwavula emigwaqweni emincane ehlotshiswe stucco, Gazebo esekusithekeni namagceke nezinezingadi imithombo.
By the way, eyinkimbinkimbi iholide lavulwa ngo-1999. I last yokulungiswa ezinkulu olwenziwa ngo-2004. Noma kunjalo, ihhotela ngcono njalo ngonyaka - lapha uzothola nje emkhathini Homely futhi izihambi efudumele, kodwa futhi imishini eziphambili kanye nomklamo ezithakazelisayo. Kunenye ehhotela elise eduze Nubian Village, - Isiqhingi Nubian 5. Empeleni, lezi amahhotela amabili ungomunye resort elikhulu, kusukela, kungakhathaliseki ukuthi indawo yokuhlala, abahambi ungakwazi ukujabulela insimu kokubili amahhotela.
kanjani izinombolo kusayithi?
Ihhotela Nubian Village Ihhotela 5 inikeza izivakashi nge izimo ukuphila kahle. On insimu yalo zikhona 292 amakamelo izigaba ezilandelayo:
amakamelo Standard 174.
12 Suites Junior.
2 Inkosi Suites.
Kungakhathaliseki isigaba, wonke amagumbi banikwa ifenisha ezidingekayo, kuhlanganise nenkosi-usayizi imibhede ne umcamelo-phezulu omatilasi, amadeski, amatafula, izihlalo lezingubo. Amagumbi ahlotshiswe in isitayela esivaliwe classical. Njalo igumbi has a kuvulandi noma ithala yangasese, lapho ungajabulela kolwandle, ukubukela ukuphila kwehhotela ngasechibini noma ukujabulela ubuhle ingadi ukuqhakaza.
Njengoba for ekhaya Imishini, kukhona Yebo, kukhona isethi ephelele. Ukuze uqale, kuyafaneleka kokukhuluma ekulawuleni isimo sezulu - a yesimanje air conditioning system nge control panel yomsebenzisi-friendly kuzosiza ukudala ukhululekile kakhulu izimo lokushisa endlini. isikhathi Mahhala kungenziwa asichitha ebukela i-TV - lapha ukukhombisa ezinye iziteshi satellite Russian. Ikamelo Ubuye ephephile amancane lapho izivakashi ezimweni eziningi, esitolo imibhalo nezinto eziyigugu. Kukhona mini-bar, kodwa okuqukethwe Kwenziwa kuphela ngesicelo izivakashi kanye ikhokhelwa ngokwehlukile. Ocingweni ungakwazi Ukushaya izingcingo zomhlaba jikelele, kodwa futhi, lokhu iyisevisi ikhokhwe.
Ngokuqinisekile nawe uzokujabulela, kanye nekamelo lokugezela ivulekile. Lapha ungakwazi ngaso sonke isikhathi uphumule okugeza Foam noma azithathe okusheshayo evuselelayo eshaweni - bamanzi ashisayo nabandayo zikhishwa ubusuku nemini. Kukhona esibukweni odongeni, esikhanyayo, yokugeza. Ihhotela iklayenti ngamunye uthola iqoqo amathawula kuhlanzekile futhi iqoqo izimonyo yegama lomkhiqizo, kuhlanganise insipho imoto.
Yilokho ikamelo ensimini ka ezinhlanu star hotel Village Nubian 5. Izibuyekezo ukuqinisekisa ukuthi amakamelo zisesimweni esikahle - nefenisha nezinto zikagesi zinhle, izinga yokuhlanza Kwenziwa nsuku zonke. Ngaphezu kwalokho, izisebenzi ehhotela ukushintsha njalo njengoba amathawula kanye amashidi.
Supply wesifunda izivakashi
abahambi Abaningi bakholelwa ukuthi leli hhotela eqoqwe konke okuhle ukuthi eGibithe ukunikela. 5 Nubian Village Ihhotela linikeza uhlelo eyaziwa njenge "zonke okufakayo". Kuhlala ekhatsi eyinkimbinkimbi ehhotela kuhlanganisa kathathu ngelanga neziphuzo zendawo Ungadla usuku lonke.
Ngaphakathi endlini, yokudlela main ukhonza ibhulakufesi lezitsha yezivakashi. Lapha uzothola ezihlukahlukene omkhulu cuisine ngamazwe nezikazwelonke - ke appetizers abandayo, futhi izinhlobo eziningana inyama kanye kwasolwandle, kanye nezithelo ezintsha, amasaladi ukukhanya, uphudingi kungcono, futhi yebo, u-ice cream ababezenzele yona. Kukhona imenyu enezingane ezinezidingo ezikhethekile, okuyinto nalo libalulekile. Isevisi wena oweta nenhlonipho ikukhonzile.
Ngaphezu kwalokho, ehhotela zikhona izikhungo eziningana iIgama. Ikakhulukazi, ungavakashela Corallo Ibha isidlo, okuyinto unikeza cuisine ikakhulukazi isiNtaliyane, kuhlanganise pizza kubhakwa, amasaladi, pasta izinhlobo eziningana pasta. Futhi ogwini kuyinto yokudlela inhlanzi El Nour, osebenzela kusihlwa - lapha ukunikeza abavakashi isidlo enhlanzi nezinye izinto zasolwandle.
NgoLwezibili nangoLwezihlanu zabahamba ivula iminyango yayo yokudlela El Dawar Sidalwe isitayela waseGibhithe bendabuko. Lapha ungakwazi hhayi kuphela ukujabulela izibiliboco okumnandi cuisine Oriental, kodwa futhi ujabulele ukubukwa exotic Afrika. By the way, udinga eceleni itafula kusengaphambili, futhi yayala ukudla zikhokhelwa ngokwehlukile.
Ngokwemvelo, ehhotela kukhona imigoqo eziningana. Ngokwesibonelo, bobabili zitholakala eduze pool - izivakashi uphiwa juice, iziphuzo ezibandayo, ice cream kanye Ungadla. A ibha indawo yokulinda uphelele yokuzijabulisa nabangani - lapha, esimweni esikhululekile, uzokwazi ukuzihlanganisa bejabulela ukunambitheka ikhofi, isiphuzo esinamandla nangengalo cocktail ezithakazelisayo angavamile.
Kusihlwa, eduze ebhishi ungabona ezimibalabala zamaBedouin etendeni izivakashi ahlinzekwa ngaphansi okuyinto zezinkambi okumnandi, eyiqiniso ikhofi zaseMpumalanga kanye kaShisha.
Beach namanzi nokungcebeleka
Soft Amabhishi anesihlabathi eziningi emanzini acwebile aleli ulwandle - yilokho unika Spas ikhubalo ekhethekile. Nubian Village 5 unendlela yawo, nakuba amancane, ezindaweni ezisogwini. Beach kungekho engaphezu kwekhulu amamitha.
Kuyaphawuleka ukuthi kukhona ichibi olunothile odabuka yemvelo nge mnene, Uzalo ephephile olwandle - indawo yokugeza umzimba izingane noma izihambi, abangakwazi ukubhukuda. Ngakolunye uhlangothi, eduze ogwini kuyinto izixhobo zama-coral, ngakho ebhukuda lapha kudingeka Izicathulo ezifanele. By endleleni, uma ungazange ulethe ke nami, wena bayakwazi ukuzihambela baye ezitolo zendawo - uqinisekile ukuthola okudingayo.
On ibhange ibekwe izambulela zokuzivikela futhi ilanga imibhede ne omatilasi ukhululekile - bavakashela Nubian Village 5 izivakashi ungasebenzisa mahhala. Futhi njengoba ebhishi yangasese futhi ebiyelwe, izivakashi ngeke be bored.
Yiqiniso, ihhotela banganikeza nezinye izinhlobo zemisebenzi yamanzi, ngaphezu ukubhukuda futhi bethamele ilanga. Ngokwesibonelo, i-on-site diving isikhungo. Wabasaqalayo, lapha kukhona uhlelo ukuqeqeshwa okukhethekile, okubandakanya ekutadisheni imithetho eyisisekelo futhi dive lokuqala echibini. Labo zezivakashi akudingeki izifundo extra lapha kungaba ukuqasha buso, amaphiko, kanye nezinto ezidingekayo ukuze diving. Kuhle kokusho ukuthi izixhobo zamakhorali ubukeka enhle ngokumangalisayo.
Ngokwemvelo, for imali eyengeziwe ungakwazi ukujabulela eminye imisebenzi yokuzilibazisa ngezinga, kuhlanganise yesikebhe, isikebhe ngomkhumbi, jet skiing kanye Ukushushuluza, nokunye .. Ngamafuphi, akudingeki be bored lapha kunoma ubani.
Ingabe kukhona izimo semisebenzi zezingane?
Yiqiniso, abazali ukuhamba nezingane, ikakhulukazi uthanda labo amahhotela okuyinto ingashintshwa ukuhlala nomndeni. & Ihhotela Nubian Village 5 - nendawo enkulu ukuze imisebenzi ekhanyayo, izingane ekhumbulekayo sika. Yiqiniso, abanikazi Ihhotela lokuqala zonke unakekele mayelana lula abazali. Ngokwesibonelo, okufunekayo ngokushesha ukuletha uhlaka egumbini lakho - le sevisi khulula.
Le restaurant has ukhetho olukhulu izitsha qiniseka ukulingana Daze wakho, ikakhulukazi uma kuziwa nama-dessert. A izivakashi encane oweta esinenhlonipho ngempela ukunikela esihlalweni lula. Uma ngasizathu simbe udinga lingekho yena isikhashana, ingane ingakha ushiye ngokuphepha umhlengikazi - at othisha umsebenzi ehhotela kakhulu abanolwazi futhi professional. Le sevisi kukhokhelwe ngokuhlukana, kodwa akufanele ukuthi kuyabiza.
Futhi ungakhathazeki mayelana ezokungcebeleka yengane, njengoba Nubian Village 5 inikeza izihambi abasha ehloniphekile imisebenzi yokuzilibazisa. Okokuqala, ake sithi ukuthi ichibi yemvelo engajulile ogwini uphelele ukugeza izingane. Ngaphezu kwalokho, izingane ungadlala echibini ehhotela. Ngo kubanda noma ebusika, izingane nivuna fun sesigabeni ehlukile zasendlini indawo yokubhukuda, ifakwe uhlelo Ukushisa - endleleni, lapha njalo ahlelwe ezemidlalo imincintiswano, ukuze bathanda.
Ngaphezu kwalokho, cishe zonke amanzi ngosuku epaki ezihehayo futhi amaslayidi amanzi - izingane lapha zingaba nobumnandi nabazali bazo noma ephelezelwa othisha.
Yiqiniso, kukhona inkundla yokudlala enkulu nge trampolines, senhliziyo, amaslayidi futhi mazes, okuyizinto athandwa ngakho ezivakashini abasha. Kukhona club yezingane. By endleleni, kukhona Animators abakhuluma isiRashiya, othisha, ngakho ingane yakho akunakwenzeka ukuba unenkinga zokuxhumana. Lapha izingane zifunde ukuba basizane, ukunikela umdlalo omnandi, ukuhlela fun imincintiswano nezinye izenzakalo, kuhlanganise ezinye izinhlelo zemfundo.
Ehhotela kukhona ebaleni lokudlala i mini-football. Ngaphezu kwalokho, izingane ungavakashela ikamelo umdlalo, lapho kukhona njalo ithuba ukuchitha isikhathi nabangane abasha ngenxa yesizathu esisodwa noma omunye umdlalo ezithakazelisayo.
Yini amasevisi angeziwe zinikelwa yimikhaya Ihhotela Nubian Village 5 (Sheikh Sharm-el-)?
Yiqiniso, nokutholakala kwezinsizakalo ezengeziwe kungaba ngokuphawulekayo lula lonke zabahamba angaphandle. Ngakho onjani amasevisi ahlinzekwa Ihhotela Nubian Village 5? SharmelSheikh - abadumile resort edolobheni, okuyinto waziphatha ezokuvakasha iminyaka eminingi. Futhi amahhotela zendawo njalo wazi indlela yokwenza iholidi ephelele.
Okokuqala kuyafaneleka ukuthi wamukelekile edilini ubusuku nemini. It Ubuye lwemali, okuyilona elisebenzayo futhi elula kakhulu. Uma wayefisa, ehhotela ungakwazi ukuqasha imoto noma ezinye izindlela zokuhamba - ngakho-ke kuyoba lula ukuhambisa ezizungeze umuzi ukuhlola ezizungezile. Imoto ingaba njalo kwesokunxele lot ehhotela yokupaka, okuyinto ifakwe uhlelo nokuvikeleka.
Ngaphezu kwalokho, insimu eyinkimbinkimbi ehhotela ukusebenzisa ikhemisi medical aid. Endabeni ka izinkinga zempilo imali encane, ungabiza udokotela egumbini. Futhi Ihhotela likuvumela ukuba uvakashele ezitolo ezinkulu yezitolo lapho ungakwazi ukuthenga izinto eziyizikhumbuzo kanye ezinye izinto kuyizidingo eziyisisekelo.
Yokuzijabulisa futhi ngisebenza izinsuku abahambi
Uma uthanda fun lolwandle iholide, izinongo liyakufanelekela nge kumnandi nemisebenzi zemfundo, siyafuna enhle kuyoba Egypt. Ihhotela Nubian Village 5 waqiniseka ukuthi amakhasimende akhe kwadingeka konke esasikudinga ukuzijabulisa. Lapha ungakwazi hhayi kuphela sunbathe zibhukude, kodwa futhi ukudlala imidlalo, ukujabulela cuisine emihle futhi, yebo, ukutadisha amasayithi zomlando odumile kakhulu isimo lasendulo.
Ngakho lokho inikeza ehhotela Nubian Village 5? Photo ebonisa ukuthi iningi begceke yokubhukuda ezinkulu, okuyinto abasebenzi ngokuthi nokubhukuda-up. Le ndawo yakhelwe iholide okuphumuzayo. By endleleni, ngenxa yale njongo, ahlelwe emhlabeni emibhedeni kanokusho omatilasi esithambile futhi isambulela zokuzivikela ungakhululeka ngaphansi kwazo. Ibhishi amathawula mahhala, ezingasetshenziswa futhi kubhekwe omunye izinzuzo.
Kodwa ezihlukahlukene imicimbi yezemidlalo aphethwe emanzini echibi elikhulu zasendlini Corallo. Phela, esimweni sezulu esibandayo lapha zihlanganisa evuthayo, ukuze amanzi njalo lokushisa emnandi. Kuyinto kule pool amakilasi ku amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela, kanye fun polo yamanzi imincintiswano. Futhi hotel inezidingo epaki yayo encane amanzi.
Yiqiniso, ezifana enkulu Ihhotela eziyinkimbinkimbi futhi linikeza izindawo eziningana kahle. Ngokwesibonelo, izivakashi banethuba ukuvakashela spa. amasevisi yakhe zikhokhelwa ngokwehlukile. Noma kunjalo, lapha uzobe inikelwe eziningi zokwelapha ekuvuseleleni, kuhlanganise ekuvuseleleni umzimba ezisonga, udaka zokugeza nokunye. D. Ngesikhathi ehhotela kukhona okuthiwa isikhungo Wellness, lapho amakhasimende bayakhuthazwa ukuvakashela i-sauna noma isisi ikamelo, uphumule Jacuzzi noma ukubhuka kweseshini massage muhle kakhulu.
Ungabi badumale, futhi abalandeli yezemidlalo ukungcebeleka, ngoba ngabo kukhona lenqwaba amathuba. Ngokwesibonelo, ungahlala uvakashela ejimini, banikwa imishini yesimanje. Ngaphezu kwalokho, labo abafisa aerobics njalo futhi i-yoga. Ihhotela inikeza izivakashi zalo ukuvakashela egumbini Billiard, lapho siyohlale obucwathile nabangani ngoba umdlalo omnandi. Kukhona futhi table tennis amatafula.
Ihhotela ibahlomisé izindawo for volleyball, basketball ne mini-football. Labo abafuna Ungahlala ukuchitha isikhathi kwelinye izinkantolo tennis - kusihlwa esikhanyayo ebaleni lokudlala, kodwa imali.
Futhi-ke, ungakhohlwa mayelana ithimba bejabule, clockwork Animators kukhona umyalo ezinhle ngempela izikebhe wakhe. Emini izingane kukhona izivakashi Entertained echibini. Ngezikhathi zakusihlwa, izivakashi zihlangana khona inkundla yemidlalo. Lapha ungakwazi ukubona umbukiso umlilo, ujabulele Umusa nemidanso Oriental, kunabaculi wabavocavoci, njll .. In yokwamukela izivakashi kukhona umculo ngesiGreki bukhoma njalo kusihlwa.
Ebusuku, i-disco - yokuvuma khulula lapha. By the way, kanye ngesonto ogwini ustaivayte grand Foam amaqembu, okuyinto ekupheleni e umbukwane umlilo show.
Yiqiniso, akusiwona wonke ukuthi angaletha izivakashi zayo Egypt. Nubian Village 5 unendlela yawo ukuvakasha edeskini. Lapha kuzosiza ukuthi ukhethe izindawo ezithakazelisayo kakhulu hambo, kanye ukuhlela uhambo lwakho ikhambo. Isibonelo, liseduze kakhulu le Nabq National Park, okuyinto nakanjani kuwufanele ukuvakashelwa - lapha ungakwazi ukujabulela ubuhle eziyingqayizivele ubunjalo waseGibhithe. Izivakashi nazo ngokuvamile ukunikela uhambo emabhayisikili isikwele ku oluyimfihlakalo Echo Valley.
Izimo zethu zihluke kakhulu endaweni ethandwa kuyinto Coloured Canyon, esemgwaqweni 150 amakhilomitha kusuka eziyinkimbinkimbi ehhotela. Lapha bayojabulela ukuvakasha okuthakazelisayo futhi ithuba lokujabulela imibala exotic yemvelo yamadwala. Futhi eningizimu olusempumalanga zidlule iNhlonhlo YaseSinayi iyona edume Ras Mohammed Park, okuyinto odume usawoti echibini elikhulu, imihlume nemvelo exotic - esikhatsini lesinyenti kuba, abatshuzi ukuza lapha, ngoba izwe ngaphansi kwamanzi kuyinto enothe.
Eceleni Sharm el-Sheikh itholakala khona, futhi kwenye indawo ezithakazelisayo, mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ngokuqinisekile wonke umuntu uyazi - iyona edume eNtabeni iSinayi, lapho izinkulungwane eziningi zeminyaka edlule eyatholwa uMose imiyalo. On esiqongweni sentaba namuhla ezakhiwa lamaSulumane nethempeli Greek-zintathu Ongcwele. On emthambekeni osenyakatho edwaleni kukhona uyithempeli likaMoya Prophet-Eliya, wadala ngaphakathi entabeni. Futhi phansi ethempelini iyona edume St Catherine, elakhiwa ngekhulu lesithupha - futhi namuhla lo shrine iyindawo yokugogobala ngamaKristu amaningi. By the way, ngokusho legend, kulapha lapho umprofethi uMose, okokuqala uNkulunkulu wabonakala, okubonisa esivuthayo.
Yeka ukuthi kuyinto yokuhlala kuleli yokungcebeleka?
Yiqiniso, izindleko iholide zabahamba kakhulu okubalulekile. Ngakho-ke yini izindleko abahlala ensimini eziyinkimbinkimbi ehhotela Nubian Village 5? Thenga ukuvakasha kungaba cishe kunoma iyiphi ejensi ezinkulu zokuhamba, njengoba ihhotela ubambisana eziningi izinkampani Russian. Inani eholidini ngeke kakhulu kuxhomeke kulokho sikhathi sonyaka ukhetha ukuhamba, ngokushesha kangakanani ibibhukelwe indawo, ukhethe ukuthi uluphi uhlobo uhambo, nokunye. D.
Isilinganiso ehhotela nsuku Nubian Village 5 izobiza ruble 5000-6000 umuntu ngamunye. Ngokwesibonelo, ukuvakasha iphakethe ukuthi kuhlanganisa uhambo wezinsuku eziyisikhombisa, indawo yokuhlala indinganiso ikamelo, ibhodi futhi fly ekilasini umnotho kubiza ruble angaba yizinkulungwane 38. Ngokwemvelo, ukubala isabelomali kuwufanele ukukhumbula ukuthi amanye amasevisi lapha, kuhlanganise izinkambo, ikhokhwe ngokwehlukana.
Ihhotela Nubian Village 5: Izibuyekezo zezivakashi Russian
Kuze kube manje, lo hhotela bemthanda izivakashi Russian. Nokho, ngemva idumela elikhulu idonsela ukunakekela ngokuqondile ku-resort Nubian Village 5. «Pegasus", efana nezinye izinkampani ezinkulu zokuhamba, incoma ukuthi amakhasimende ayo kule ndawo.
Izivakashi ikakhulukazi kuqashelwe indinganiso efanele eziphilayo - amakamelo ihlanzekile futhi icocekile, amathawula washintsha nsuku zonke, nefenisha nezinto zikagesi zihlale zisesimweni esihle. Ngokwazi ukudla okuhle olunikezwa ihhotela Nubian Village 5? Izibuyekezo zezivakashi Russian abonisa ukuthi imenyu lapha ehlukahlukene ngempela - ikakhulukazi adunyiswe enhlanzi nezinye izinto zasolwandle izitsha evelayo kudeskithophu njalo.
Yiqiniso, omunye izinzuzo hhotela ukutholakala amaqembu aphumayo of Animators, abenza umsebenzi oncomekayo kanye nomsebenzi wabo. Emini, nibe nilindele imisebenzi yezemidlalo iqembu nemincintiswano kumnandi. Ngezikhathi zakusihlwa, izivakashi isizungu akukho ukusebenza kancane ezithakazelisayo kanye nemibukiso. Ngaphezu kwalokho, abafana bekulungele ukusiza ngezeluleko.
Empeleni, lokhu impahla kahle kuze kube iholidi ngaphambi lolwandle. Woza lapha njengomkhaya nezingane kanye nezinkampani intsha ngisho abahambi amadala - wonke umuntu uthola ukuzijabulisa angayithandi.
Ihhotela Sharm Holiday Resort 4 * (Sharm El Sheikh): izithombe kanye nokubuyekeza
Life Green Hill Ihhotela - ukuphumula emithambekeni green ogwini Mediterranean
Iberostar Mehari 4 * (Tunis, Djerba): incazelo, izinsizakalo, ukubuyekezwa
Ihhotela "Basilica", Kazan Igumbi incazelo kanye nokubuyekeza postoyateltsev
Indlu Guest "Salang" Lazarevskoye: incazelo, imisebenzi, ukubuyekeza
Amahhotela e-Vietnam, Nha Trang. Emahhotela aphambili e-Vietnam. Imephu Nha Trang nge amahhotela
Indlela ukuhlela dinner yothando
Hans Selye: Biography, umnikelo isayensi. Izincwadi ezibhaliwe Gansom Kheth
Umuthi Panadol. Yokusetshenziswa
Summer manicure: izincomo nemibono
Ukubhula emgwaqeni - indlela ukwazi ikusasa, noma ukunakekelwa esikhathini esidlule.
Indlela yokwenza polystyrene odongeni ukwahlukanisa
I-scarf-transformer ngezinaliti zokugaya: imidwebo nencazelo. Ukuthola amaphethini for scarf-transformer
Hairspray "Els. Elixir Double." Izibuyekezo kanye Izincomo